Indawo epholileyo neshushu kwiNtlambo yaseAran.
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMiren Karmele
Antecada Iapatmenti ibekwe kwidolophu Es Bòrdes kwisakhiwo esinemigangatho-3 kunye ikheshi, ngothando ihonjiswe, abe isitiya yabahlali enkulu, iya kuba yindawo efanelekileyo ukuze bachithe iintsuku ezimbalwa ukuyekelela okanye ukunandipha izinto ezinikezelwa yi-Valley ukususela Ana , 24km ukusuka eBaqueira Beret.
Indlu ye-Antecada ephethe abantu abayi-6, isasazwe kumgangatho omnye ophantsi kunye negumbi lokuhlala elipholileyo elinendawo yomlilo kunye nokufikelela kwi-terrace encinci, ikhitshi evulekileyo nayo yonke into oyifunayo.
Amagumbi okulala ahlulwe abe yigumbi eliphindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo kunye nokufikelela kwi-terrace, igumbi elinebhedi enebhedi kunye neebhedi ezi-2 ezingatshatanga kunye negumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo.
Irenti ibandakanya indawo yokupaka efikelelekayo kunye negumbi lokugcina i-ski kwisakhiwo esifanayo.
I-Apartameto Antecada inikezela ngezaphulelo kwizifundo ze-ski kunye nezixhobo ezisezantsi kwamathambeka.
Fumana ikhaya lakho elilandelayo ngeeholide zakho, ngaba uza kulikhumbula?
Umbuki zindwendwe ngu- Miren Karmele
Inombolo yomthetho: HUTVA-040916